Amaphoyisa ase-KZN axwayisa ngomkhonyovu wokuqola abathenga izimoto | News24
Amaphoyisa ase-KZN axwayisa ngomkhonyovu wokuqola abathenga izimoto
Pietermaritzburg – Sezenyukile izigameko zokuqolwa kwabantu abasuke bezimisele ngokuthenga izimoto njengoba kufakwa izikhangiso ezingamanga emaphephandabeni nakwi-internet eMgungundlovu, kusho amaphoyisa aKwaZulu-Natal ngoLwesithathu.
Amaphoyisa eMgungundlovu athi zenyukile izigameko zokudayiswa kwezimoto kube kuqolwa abantu, kusho okhulumela amaphoyisa uLieutenant Colonel Thulani Zwane.
"Abantu abasuke bengasoli lutho baba yizisulu zalezi zikhangiso ezingamanga bese befaka imali kuma-akhawunti abasolwa, ngaphandle kokubona imoto ngaphambi kokuyithenga nokuthi baqinisekise ukuthi yonke into yenziwa ngokusemthethweni," kusho uZwane.
UZwane uthe, esigamekweni sakamuva, owesifazane wadiphozitha u-R13 800 kwi-akhawunti yenkampani engumbombayi, eyayifake isikhangiso seToyota RunX edayisayo.
OLUNYE UDABA: Amaphoyisa axwayisa ama-blesser ukuba aphephe ngalesi sikhathi samaholidi
"Isisulu saqala saba nokusola ngesikhathi le moto ingasadilivwa, sase senza uphenyo sathola ukuthi le nkampani ingumbombayi futhi isikhangiso sasingamanga," esho.
UZwane uxwayise ngokuthi abantu kumele baqinisekise ukuthi bathenga okuyikho ngokuthi benze okufanele ukuqinisekisa lokho ngaphambi kokukhipha imali.
"Izisulu kuvamise ukuthi zifakwe ngaphansi kwengcindezi yokuba zithenge lokho okusuke kudayiswa kungenjalo kuzobaphutha. Ngenxa yokweswela bese ziyathenga kanti azazi ukuthi zingena ogibeni lwabacuphi."
Unxuse ababe yizisulu zalo mkhonyovu ukuba baxhumane namaphoyisa aseduzane noma bashayele iCrime Stop ku-08600 10111.